Topnepalnews.com | प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण के का लागि ? को-को जाँदैछन् ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण के का लागि ? को-को जाँदैछन् ?
Posted on: April 04, 2018 | views: 636
काठमाडौं । दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत २३ गते देखि तीनदिने राजकीय भ्रमणमा भारत जाँदैछन् । पराराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा ओली तीन दिने भ्रमणका जान लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमण देशको शीर उच्च बनाउँदै विकासको लहर भित्र्याउनेतर्फ केन्द्रित हुने दावी समेत गरेका छन् । तीन दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति भेनकाई नायडु, समकक्षी मोदीसँग भेट गर्नेछन् । उनीहरुँंग प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपक्षीय हितका विषयमा धारणा राख्नेछन् । भारतीय वरिष्ठ मन्त्रीहरुले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसँग छुट्टै भेटवार्ता गर्नेछन् ।
भ्रमणको उद्देश्य के ?
पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधामन्त्री ओली भारत जान लागेका हुन् । यसै साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बन्ध सुधारकै लागि भारत जान लागेको औपचारिक रुपमा बताएका थिए । नेपाल र भारतबीच भौगोलिक सुगमता र निकटता भएपनि दुई देशका सम्बन्धका हरेक पहलुहरुमा वर्षौदेखिका समस्याहरुको खात लाग्न छोडेको छैन।
मुलतः निर्वाध व्यापार तथा पारवाहन अधिकार, सीमा अतिक्रमण, सीमापार अपराध, आप्रवासन र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपलगायतका कारणहरुले द्विपक्षीय सम्बन्धमा तिक्तता पनि आउँदै जादै गर्ने गरेका छन्। मधेस आन्दोलन र विनाशकारी भूकम्पबाट थलिएको नेपालविरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण झन्डै–झन्डै मानवीय संकट नै उत्पन्न भएको थियो।
संविधान जारी भएकोमा असन्तुटि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी गरेपछि ओली नेतृत्वको विगतको सरकारसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो त्यसबेलाको भ्रमणका क्रममा नेपालमा संविधान जारी भएको विषयमा भारतले स्वागत गर्न समेत कन्जुस्याईं गरेपछि द्विपक्षीय वक्तव्य समेत जारी भएको थिएन ।
स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी तीनवटै तहका चुनावमा एमाले नेतृत्वका बाम गठबन्धन शक्तिशाली रुपमा उदाएपछि भारतीय पक्षले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारेर जान चाहेको थियो । त्यसकै लागि माहौल बनाउन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन् । स्वराजको भ्रमण एमालेको निमन्त्रणामा भएको थियो ।
दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएपछि मात्र आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने ठानेका ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो भ्रमण भारत नै गर्न लागेका हुन् ।
को-को जाँदैछन् भारत भ्रमणमा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा ५३ जना र त्यति नै संख्यामा निजी क्षेत्रका सञ्चारकर्मी र अन्य व्यवसायीहरु सहभागी हुने भएका छन् । काठमाडौबाट जाने सरकारी टोलीमा ४४ जना र दिल्ली दुतावासका ९ जना अधिकारी सामेल हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा पत्नी राधिका शाक्यसहित परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ भ्रमणमा जाने छन्।
भ्रमण टोलीमा सांसदहरु माओवादी केन्द्रका दिनानाथ शर्मा, रामेश्वर राय यादव राष्ट्रिय जनता पार्टीका शरदसिंह भण्डारी, संघीय समाजवादी फोरम पार्टीका विमल श्रीवास्तव पनि रहनेछन् ।
भ्रमण टोलीमा सहभागी हुने मन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयका सचिवहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयको रिजनल अर्गनाइजेसन डिभिजन, भारत डेस्कका अधिकारी पनि रहनेछन् । यसपटक कलाकारहरु राजेश हमाल, दिनेश डिसी पनि सहभागी हुँदैछन् । निजी क्षेत्रबाट सहभागी हुने सदस्यहरुको नाम संकलन हुने क्रम जारी छ । सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओलीले यसपालि सीमित र आवश्यक पात्रहरुलाई मात्र भ्रमण टोलीमा सामेल गराउने भने पनि टोली ठूलै हुने भएको छ ।
खर्च कसरी व्योहोरिन्छ ?
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमन्डल सामेल हुने परम्परा छ । ओहोदामा रहेका सरकारी अधिकारीका अतिरिक्त सांसदहरुको टोली, उद्योगी व्यापारीको टोली, सञ्चारकर्मीको टोली, प्रधानमन्त्रीकै सहयोगीको समूह र यसपटक कलाकारको समूह भ्रमण दलमा सामेल हुनेछन् । आतिथ्य दिने भारतले १५/१६ जनाको मात्रै खर्च व्योहोर्ने गर्छ । बाँकी सदस्यको खर्च नेपाल सरकार र स्वयंले व्योहोर्ने चलन छ ।
बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा
भारतको राजकीय भ्रमण क्रममा नयाँ बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर निर्माण शुरु गर्ने विषयमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिएको हो।
सो प्रसारण लाइनलाई नेपालले सरकारी तहमा नै निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ। तर भारतीय पक्षबाट भने व्यावसायिकरुपमा नै सो परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालले हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् भारतबाट १ सय ४५ मेगावाट विद्युतआयात गर्दै आएको छ। विद्युत माग बढी भएका क्षेत्रलाई सहजरुपमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सवस्टेसनपूर्व रोहिणीखोला नजिक अर्को सवस्टेसन बनाउने र भारतबाट विद्युत आयात गर्ने सरकारको तयारी छ। सो प्रसारण लाइनबाट विद्युत आयात मात्रै नभई निर्यातका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको छ।
बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायतका स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्। सो प्रसारण लाइनबाट करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत आयात तथा निर्यात गर्न सकिनेछ। विसं २०७३ असार १३ र १४ गते सम्पन्न भएको दुबै मुलुकका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो।
दुबै मुलुकले आआफ्नोतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकमा सहमति भएपनि पछिल्लो दिनमा निर्माणको प्रक्रिया, लगानीका विषयमा भने द्विपक्षीय सहमति हुन सकेको छैन। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा कुनै समस्या आए मुलुकभित्रको ऊर्जा वितरण प्रणालीलाई यथावत् राख्न वैकल्पिक प्रसारण लाइन सहयोगी हुने भएका कारण सो प्रसारण लाइन अघि बढाउन लागिएको हो। विद्युतका मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले पनि सरकारको प्राथमिकतामा उक्त प्रसारण लाइन राखिएको हो।